JACKSHUND DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Jackshund Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Jack Russell Terrier / eeyaha isku dhafan ee Dachshund
'Kani waa eeydayda Rusty. Waa 3 jir ku jira sawirkan, waana a JRT / silig ku shaqeeya Dachshund iskutallaab
Jackshund ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Jack Russell Terrier iyo Dachshund . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
iskudhaf ah 'pinchercher dachshund mix' oo iib ah
Eygeyga Millie waa isku darka Jack Russell / Dachshund. Waxaan ugu yeernaa Jackshund. Millie waxay ka hooseysaa culeyska eyga isku dhafan. In kasta oo inta badan Jackshunds ay qiyaastii yihiin 15 ilaa 15 rodol, Millie waa kaliya 12 rodol. Iyadu waa eey aad u jecel oo dabeecad wanaagsan. Waxay leedahay jilif aad u dheer, laakiin waxay isticmaashaa oo keliya markay wax cabsiiyaan. Sawirradan ayay ka weyn tahay hal sano. Kordhinteeda ma ahan wax dhib ah, laakiin waxay ku tababaraneysaa inaysan isticmaalin musqusha guriga waxay caddaysay inay caqabad tahay. Mararka qaarkood waxay aadi doontaa musqusha guriga laakiin way fahamsan tahay taas, ugu horreyntii, socdo waa waqtiga ugu fiican ee la tago. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto oo ay la oroddo eyga kale, Jester, kaasoo ah 2 jir lab ah oo loo yaqaan 'Cockeranian'. Waxay jeceshahay ciyaarta soo-qaadashada iyo orodka sida ugu dhakhsaha badan Waxay tahay mid firfircoon oo jimicsi leh. Guud ahaan, waxaan dhihi lahaa waxay heshay tan ugu fiican labada nooc. '
'Kuwani waa eeyadayda, Mia iyo Mico. Hooyadood waxay ahayd Jack Russell Terrier aabahoodna wuxuu ahaa Dachshund. Mia wax badan oo hooyadeed ah ayay ku dhex jirtaa iyada had iyo jeer sarreysa oo diyaar u ah inuu ciyaaro , laakiin Mico wax badan ayuu aabihiis ku leeyahay isaga oo ah eey aad u deggan, caajis badan. Labaduba waa toban sano jir walina waxay u dhaqmaan sidii eeyo. Waxay sidoo kale aad u jecel yihiin marka ay u timaado dadka, laakiin isla marka ay arkaan eey kale waxay u baxaan nuts! Isku soo wada duuboo, iyagu waa eeyo waaweyn waxaanan jeclahay 'xoogaa yar.'
Jackshunds Mia iyo Mico — hooyadood waxay ahayd Jack Russell Terrier aabahoodna wuxuu ahaa Dachshund.
Mico the Jackshund (Jack Russell Terrier / isku darka Dachshund)
Mia the Jackshund (Jack Russell Terrier / isku darka Dachshund)
Jackshunds Mia iyo Mico oo ah eeyo yaryar oo yar yar oo is ag seexda
Mia the Jackshund (Jack Russell Terrier / Dachshund mix) oo ah eey
jack russell terrier mix qasan
Sawirada Jackshund 1
Liiska eeyaha Jeer Russell Russell Terrier Mix
eyga shar pei oo lagu qasay pitbull
chihuahua isku darka Jack Russell Pit
boqorka charles spaniel iyo chihuahua mix